ဘလော့တွေနဲ့ အချိန်အနည်းငယ် ဝေးကွာခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် အခု ပြန်ရေးဖို့အတွက် ပြန်လာပါပြီ...။ ပြန်ရေးမယ် ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်ဘာကိုရေးရမလဲ မစဉ်းစားရသေးပါဘူး...။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကိုတော့ ရေးနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမှာပါ။ ဘလော့ဂ်ကို ပိတ်ထားလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းကတော့ template ကလိတာ လွန်ပြီး ရှင်းနေရတာရယ်.. ရေးချင်စိတ်လျော့ နည်းသွားလို့ရယ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်...။ ဒါပေမယ့် နားနေတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ ကျွန်တော် ပြောစရာတွေ၊ ရေးချင်စရာတွေ အများကြီးရလာပါတယ်..။ ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်ပိတ်ထားတုန်းက ဘာကြောင့် ဖတ်လို့မရတော့တာလဲ.... ဘလော့ဂ်က ဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုပြီး သူငယ်ချင်းတွေက လာမေးကြပါတယ်...။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တယ် google လုပ်ပုံက သူတို့ နိုင်ငံက ယဉ်ကျေးမူ့အရဆိုရင် ဘယ်လိုနေမလဲ မသိပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဘာသာပြန်ကြည့်ရင်တော့ ကိုယ့်ကိုပဲ မဖတ်စေချင်လို့ ပိတ်လိုက်သလိုမျိုးဖြစ်နေတာကိုး...........။ ရေးပုံကလည်း ကြည့်လေ..
It doesn't look like you have been invited to read this blog. If you think this isamistake, you might want to contact the blog author and request an invitation. "
ဆိုတော့က ဒီစာကို ဖတ်ကြည့်ရင် အောင့်သီးအောင့်တောက် ဖြစ်ရသလိုပါပဲ....။ ဘလော့ဂ်နဲ့ မစိမ်းတဲ့သူတွေ အထူးသဖြင့် ဘလော့ဂ်ဂါတွေကတော့ ကိစ္စမရှိပေမယ့် အပြင်က သူငယ်ချင်းတွေကိုတော့ ကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်ရပါတယ်..။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်က ဒီဘလော့ဂ်ကို ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ဖတ်လို့ရအောင် ကန့်သတ်ပြီး ပိတ်လိုက်တာပါ...။
အခုတော့ google တို့ရေးပုံက ဒီလိုဆိုတော့ ကျွန်တော့်မှာ သူငယ်ချင်းတွေကို ရှင်းပြနေရပါတယ်။ တကယ်ဆို ဒီဘလော့ဂ်ဟာ စာရေးသူတစ်ယောက်တည်း ဖတ်နိုင်ပါတယ် ဘာညာဆိုပြီး
သတိပေးသင့်တာပေါ့... ။ ခုတော့ လုပ်ပုံက..။ အဲ့ဒီအတွက် ကျွန်တော့်ကို အားပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ၊ မိတ်ဆွေများကို အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျာ..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်
ပြန်ရေးနိုင်အောင် ကြိုးစားသွားပါမယ်..။ ပြန်ရေးဖို့အတွက် မြှောက်ထိုးပင့်ကော် အဲ အဲ နောက်တာ :) တိုက်တွန်းကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများကိုလည်း အရမ်း အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ..။
ရေးသားသူ....... မောင်ဖားကြီး 13 ယောက် မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်